‘दुई हजार बढीको गर्भपतन गरेँ, पछुतो छैन’ – HostKhabar ::
सन् १९९१ मा एमबिबिएस सकेलगत्तै चिकित्सकीय पेशामा प्रवेश गरेका प्रा।डा। गेहनाथ बराल यतिबेला परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीका प्रमुख कन्सल्टेन्ट छन्। उनको खातामा सात हजारभन्दा बढी महिलाको मेजर सर्जरी गरिसकेको क्रेडिट छ। दुई हजारभन्दा बढीको त उनले गर्भपतन नै गरेका छन्। विराटनगरबाट चिकित्सकीय यात्रा शुरु गरेका उनले क्यानडाबाट चिकित्सकीय व्यवस्थापनको उच्च अध्ययन गरेका छन्। उनै स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा।डा। बरालसँग नेपालमा अबोर्सनको अवस्था, बद्लिँदो जमाना, गर्भपतनका कारण उत्पन्न हुने विविध स्वास्थ्य समस्यामाथि केन्द्रित रही उपेन्द्र खड्काले गरेको अन्तरंगः
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धादिङको गजुरीमा केही समय काम गरेँ। रमाइलै भयो १
विभिन्न अस्पतालमा काम गर्दागदै १९९५ मा एक वर्ष पोस्ट ग्र्याजुएट डिप्लोमा इन गाइनोक्लोजी एन्ड अब्स्टेट्रिक्स ९डिजिओ० पढेँ। त्यसपछि विभिन्न अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञका रुपमा काम गर्न थालेँ। यस क्रममा मैले भरतपुर अस्पतालमा झण्डै ८र९ महिना काम गरेँ। भरतपुरमा काम गर्दागर्दै पूर्वी अफ्रिकामा गएर काम गर्ने मौकासमेत पाएँ।
मैले त यहाँलाई परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा देखेको निकै भयो नि?
डाक्टर भएर पनि बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसन पढ्ने रु कुरा अलि नमिलेजस्तो लाग्यो नि ?
सन् १९९५ डिजिओ गरिसकेपछि गर्भपतन सेवा दिन थालेँ। एक जना विवाहित महिलाको करिब सात हप्ताको गर्भपतन गरेको मेरो पहिलो अनुभव थियो। ती महिलाले रोगका कारण लामो समयसम्म औषधी सेवन गरेकी रहिछन्। यस्तो अवस्थामा गर्भ बस्नु खतरनाक हुन्छ भनेर गर्भपतनका लागि श्रीमानरश्रीमती नै आए। औषधी सेवनका कारण बच्चा स्वस्थ जन्मदैन कि भन्ने लागेछ। त्यसैले उनले गर्भपतन गर्ने निर्णय गरेकी रहिछन्।
दिन्छु नि १ सामान्य अवस्थामा गर्भमा बच्चा बसिसकेको छ भने बच्चा जन्माउने नै सल्लाह दिन्छु। पुनः बच्चा नजन्माउनुपर्ने अवस्थामा भने स्थायी परिवार नियोजनको विधि अपनाउन सल्लाह दिन्छु।
यहाँ दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरा सेवा प्रदायक सर्टिफाइड र ट्रेनिङप्राप्त हुनुपर्छ। अर्को, गर्भपतन सेवा दिने ठाउँ ९संस्था० पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। सूचीकृत सेवाप्रदायक संस्थामा सेवा लिनुपर्छ तर औषधी पसलमा जथाभावी गर्भ पतन गराउनु हुँदैन।
त्यसो भए रिसर्च पेपर तयार गर्दा कति हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन भ्यालिड हुन्छ?
त्यसो भए गत वर्ष आएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, ऐन २०७५’ मा गर्भपतनसम्बन्धी २८ हप्ते प्रावधान राखिनु गलत हो?
हो। ऐनअनुसार काम गर भन्यो भने प्रोफेसन छोड्ने अवस्था छ। काम गर्ने अवस्था छैन। यो ऐन संशोधन नै संशोधन गर्नुपर्छ। आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई हेरेर उपचार गर्नुपर्छ। कतिपय महिलाको २८ हप्तापछि बच्चा ठूलो भएको अवस्थामा डेलिभरी गराउनुपर्ने हुन्छ। यो ऐनअनुसार त यसरी उपचार गर्नसमेत गाह्रो देखिन्छ। उपचार त गर्नुप(यो नि !
संख्या त बढिहाल्छ नि १ कमर्सियल हिसाबले गर्भपतन गर्ने पनि छन्। कमर्सियल हिसाबले गर्भपतन गर्ने संस्थालाई त जति धेरै समयसम्म गर्भपतन गर्न पाइयो, त्यति फाइदा हुन्छ नि १ तर स्वास्थ्यको हिसाबले त लामो समयको गर्भ पतन गर्नु खतरनाक हो।
यहाँ प्रब्लम छ। डाक्टरले अहिलेको संविधानअनुसार पनि म उपचार दिन्न भन्न पाइँदैन। जबकि यो ऐनलाई आधार मान्दा २८ हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न पाइने देखिन्छ। उपचारात्मक हिसाबले त्यो भन्दा बढीको गर्भपतन नगर्ने त रु साइन्सको अगेन्स्टमा कानुन बन्यो क्या !
यो प्रावधान राखिनुमा एनजीओ र आइएनजीओको पनि भूमिका छ भनिन्छ। उनीहरुलाई २८ हप्ते प्रावधान राख्दा के फाइदा हुन्छ रु
सुसाइड गर्न हिँडकी १५र१६ वर्षकी युवतीको गर्भपतन गरिदिएँ। सुसाइड गर्न हिँडेकी महिलालाई परिवारले बाटामा भेटेर ल्याएका रहेछन्। बलात्कार भएको रहेछ। १८ हप्ता मुनिको गर्भ थियो, उनी बाँचिन्। उनी बाँचेकामा मलाई पनि आनन्द लाग्यो। म आफू चिकित्सक हुँदा, विशेषज्ञ हुँदा खुसी भएको थिएँ। आफूले गरेको उपचार सफल हुँदा खुसी भइने रहेछ १
नागरिक दैनिकको साप्ताहिक पत्रिका शुक्रबारबाट
नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमले ओलीलाई सम्झाए